Kool San – Medium
Published in UI/ UX Sharing
UI Designers/UX Designers အတွက် Sketching အရေးပါမှု နှင့် Sketching မလုပ်ပဲ UIကို ဘယ်တော့မှ တန်းမဆွဲပါနဲ့။
စာဖတ်သူတို့ဟာ UI Designer တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် UI/UX Designer or UX Designer တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Sketching ကတော့ မလွဲမသေလုပ်သင့်ပါတယ်။Sketching မလုပ်ပဲ UIကို ဘယ်တော့မှ တန်းမဆွဲပါနဲ့။
UI/UX မှာ Sketching ဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခု ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပုံဆွဲတတ်စရာ မလိုပါဘူး။ (ပုံစံတကျ sketch ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံလောက်ဆိုရင်တောင်တော်တော် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။)
ဘာဆွဲတတ်ရင် Sketch လုပ်လို့ရပြီလဲ?
Read more in UI/ UX Sharing ·4min read
ရှေ့တပတ်က UI Designers တွေအတွက်ရေးပေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးဟာ UI Designerတွေအတွက် အထောက်အကူပြုတယ်လို့ သိရလို့ ကျနော် ဝမ်းသာပါတယ်။
ကျနော်က အခုတလောနေသိပ််မကောင်းတော့ ပထမတော့ ဒီတစ်ပတ်စာရေးတာ နား မလို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်း ဒီသီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ကျနော့စာဖတ်သူတွေကို အကျိုးဖြစ် အဖတ်တင်စေမဲ့ Learning တစ်ခုခုတော့ ပေးခဲ့ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ဒီဆောင်းပါးကို ညက အသည်းအသန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ရှေးတစ်ပတ်ကတော့ UI/UX ဘက်ကိုပြောင်းရင် အမြန်ဆုံးဖြတ်လမ်းလိုက်နည်း(တစ်ပွဲတိုးနည်း)ကို ရေးခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တော့ — — ဘယ်Career မဆို နည်းမှန်လမ်းမှန် နဲ့ အချိန်ပေး အင်အားစိုက်မှု တစ်ခုရှိမှ ရေရှည်မှာ sustainable ဖြစ်တဲ့ career life ကိုရနိုင်မှာပါ။
ဒီတော့ UX အခြေခံကောင်းရဖို့ Free Online UX Courses တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Free Course ဆိုတွေဟာ လျော့တွက်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ် ယူတတ်ရင်ယူတတ်သလို တာသွားတဲ့ course တွေပါ။
1. Future Learn — Digital Skills: User Experience
Read more in UI/ UX Sharing ·3min read
UI Designers တွေရဲ့ ရေရှည်ရပ်တည်မှု နဲ့ UI/UX Designers ဘက်အခြမ်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း
ဒီဆောင်းပါးကို ကျနော်ရဲ့ LinkedIn Connections အများစုဟာ UI Designer တွေများတဲ့အတွက် UI Designers တွေအတွက်ရေးပေးထားတာပါ။
ဒီနေ့ရေးမယ့်အကြောင်းကတော့ စာဖတ်သူ UI Designers တွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီးရင် အဖြေတစ်ခုရမယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ ရေရှည် ရပ်တည်မှု အတွက် မေးစရာ တွေးစရာတစ်ခုကျန်ခဲ့ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။
ရေရှည်မှာ UI Designers တွေအတွက် UI ဆွဲပြီးဖို့က ရပ်တည်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကို အောက်က အချက်တွေကို အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ််။
1)အလုပ်နေရာခေါ်ဆိုမှု နှင့် အလုပ်ခွင်အနေအထား
3)UI Designers တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ချို့
1)အလုပ်နေရာခေါ်ဆိုမှု နှင့် အလုပ်ခွင်အနေအထာ:
နိုင်ငံတကာမှာ UI Designers ဆိုပြီးသက်သက်ရပ်တည်လို့ရတဲ့အတွက် UI Designer Job Posts တွေကအများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ UI Designer အလုပ် ခေါ်ဆိုမှု ပမာဏဟာ UI/UX Designer အလုပ်ခေါ်ဆိုမှု ပမာဏနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ခန့်မှန်းခြေ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရှိပါတယ်။
အလုပ်ခေါ်တဲ့ Post တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း UI/UX Designer post က7ခုဆို UI Designer post က 3ခုလောက်ပဲတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ အားမလျော့စေချင်ပါဘူး။ ရှိတဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံထဲမှာကိုယ်ပါနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ UI နဲ့ ပက်သက်ရင်ဘယ်ဘက်က စမ်းစမ်း အရိုးချည်းပဲဆိုတဲ့ ဒေါင်ဒေါင်မြည် UI Designers တွေလိုမျိုးပေါ့။…
ဒီတစ်ခေါက် COVID -19 2nd Wave နှင့် ကျနော်
ဒီနေ့တော့ UI/UX အကြောင်းဆိုတာထက် ကျနော်တို့ ဒီ COVID-19 ကာလမှာ ကြုံရတဲ့အရာတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကုန်လုံးမဟုတ်တောင် တစ်ချို့တစ်လေတော့ တူနေပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် relate ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ဒီအကြောင်းရေးဖြစ်တာလို့ ကြိုအသိပေးချင်ပါတယ်။
COVID-19 First Wave တုန်းက...
ကျနော်က အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို စဝင်ခါစ ဆိုတော့ ….အသစ်အနေနဲ့ Focus လုပ်စရာတွေများသလို ကောင်းတဲ့အမတစ်ယောက်ရဲ့ လက်အောက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျနော့် အတွက် First Wave ဆိုတာ ဘာမှန်းသိပ်မသိလိုက်ပါဘူး။(ဒီလိုပြောတာဟာ ကျနော် ကျော်ဖြတ်ပြီးခဲ့လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
အခု COVID-19 Second Wave မှာတော့ …
လစာထုတ်တဲ့ ရက်တွေဟာ ကျနော့အတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့လွန်းတယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် communicate လုပ်ရတာ ပိုအားစိုက်ထုတ်ရတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပဲ UI/UX အလုပ်တွေလုပ်နေရတော့ Team နဲ့ collaboration မရှိတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Output တွေကို တစ်ခါတစ်လေ သံသယ ဝင်ချင်တယ်။ ဘာလုပ်လုပ် Not Good Enough လို့ခံစားရတယ်။
ကျနော်က အင်းစိန်မှာနေတာ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖြတ်သွားတဲ့ လူနာတင်ယာဉ်ကားဆိုတာ မရေတွက်နိုင် ပြီးတော့ ည၂ နာရီ ၃နာရီထိ ..လူနာတင်ယာဉ်တွေဖြတ်သွားတုန်းပဲ။
တစ်နေ့နေ့ ငါကူးတဲ့အထဲပါသွားမှာပဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က အခါခါဝင်(ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်က လူကြီးတွေဟာ နေ့တိုင်းအပြင်မထွက်ပဲမနေနိုင်ဘူး။ နောက် ဘယ်လောက်ပြောပြော Mask ကို အိမ်ထဲရောက်မှ ချွတ်တာ၊ တစ်ခါတစ်လေ Mask ချွတ်တာက မသုံးရသေးတဲ့ Maskတွေထားတဲ့ ဘူးပေါ်တင်ရင်တင်၊ မတင်ရင် ရေခဲသေတ္တာပေါ်တင်ထားတာ၊ မတင်နဲ့လို့ပြောလည်းခဏပဲ။…
User Goal နဲ့ User Task ဆိုတာဘာလဲ နှင့် User Experience ကောင်းဖို့ User Goal နဲ့ User Task ကို ချိတ်ဆက်စဥ်းစားပုံ
Photo on Unsplash and redesign by Kool
တစ်ခါတုန်းက ကျနော် Ul/UX Designerတွေမဟုတ်တဲ့ Team members တွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတဲ့အခါ သူတို့ User အကြောင်းနားလည်ရင် အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေလို့ Feature/Function တစ်ခုချင်းဆီအတွက် User Task နဲ့ User Goal ကို Excel အကွက်တွေထဲမှာ ဖြည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော့ Team Member တစ်ယောက်က User Goal ဆိုတာဘာလဲ။ User Task ကရော ဘာလဲ။ User Goal နဲ့ Task ကရော ဘယ်လိုကွဲပြားတာလဲ လို့ ကျနော့ကို မေးတယ်။
သူမေးမှပဲ ကိုယ့်ဘာသာကို သိနေတယ်လို့ သေချာ ထင်ထားတဲ့ User Goal နဲ့ User Task ကို သိသလိုလို နဲ့ ….ကိုယ်တိုင်က သူများကို ပြန်ရှင်းပြရလောက်အောင် မသိသေးဘူးဆိုတာ …..ကိုယ့်ကိုယ် ကို သတိထားမိသွားတယ်။ အဲ့တာနဲ့ အိုကေ။ ညနေကျရင် ကျနော် sample တစ်ခုရေးပြပေးမယ်လို့ ပြောပြီး ကျနော် စာအပြေးဖတ်ရပါတော့တယ်။
ဒါကတော့ ဒီဆောင်းပါးဖြစ်လာရတဲ့ Behind the Story ပေါ့။ 😅
Photo by Marco Bianchetti on Unsplash and redesign by Kool
ကျနော်တို့ UX Designers တွေအတွက်ရှိသင့်တဲ့. အဓိကအရေးကြီးတဲ့ Core Skills တွေထဲမှာ Empathy(ကိုယ်ချင်းစာနာ နားလည်ခြင်း) လည်းပါပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ Users တွေမဟုတ်တဲ့အတွက် … Usersတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ခံစားချက်တွေ သူတို့က ကိုယ့် Digital Product/Service ကို သုံးတဲ့အခါ တွေးခေါ်ပုံတွေ ယူဆချက်တွေ ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ ဒီအတိုင်းတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။
Click or tap ကို ဘယ်လောက်ဆို user task/goal ပြီးမြောက်သင့်တယ်။ (သို့မဟုတ်) User ရှာတာ တွေ့သင့်လားဆိုရင်….
ကျနော်ကတော့ ကိုယ်ကြုံနေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
တစ်ချို့ အခြေနေတွေမှာ Clicks or Taps အရေတွက်ကို ရေတွက်တာဟာ အကျိုးရလဒ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့
တစ်ချို့ ကိစ္စတွေကတော့ အဲ့ Click count ကို ရေတွက်လိုက်လို့ အမှားကြီးမှားပြီး ဆိုးကျိုးရတာပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ Userက Information တစ်ခုကိုရှာတာ နောက် Menu bar/ Navigation Bar or Search Box မှာ … User ရှာတဲ့အရာရှိတဲ့ Page ကို ရောက်ဖို့ အခြေအနေမှာ Clicks ဘယ်နှစ်ခါနှိပ်ရင် တွေ့ရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီ Website/Appကို ရောက်နေပြီးမှ …. ဒီထဲမှာ လမ်းပျောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ UI/UX တစ်ခုခု (or) နှစ်ခုစလုံးမှာ ပြဿနာ ရှိနေတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။
Click count ကို User Journey ကို ပိုကောင်းအောင်(improve) လုပ်တဲ့အခါ သုံးသပ် စဉ်းစားတွက်ချက်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာ …. လက်ရှိ User Journey ရဲ့ total clicks ဘယ်နှစ်ခုမှာ user task/goal ပြီးမြောက်တယ်။
User task/goal ကို ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါ User က စိတ်ပျက်ပြီးကျန်ခဲ့တာလား?
Read more in UI/ UX Sharing ·2min read
Law of UX: Jakob’s Law(The use of familiar patterns in design)
UI/UX Designers တွေအနေနဲ့ Human Psychology and Behavior တွေဆိုင်တဲ့ အခြေခံကျတဲ့ UX Laws တွေကို နားလည် အသုံးချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော့ အနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးရေးတဲ့အခါ ကျနောဖတ်ထား သိထားတာတွေကို စာလုံးအနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ psychology အပိုင်းတွေပါတဲ့အတွက် တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ ပြီးတော့ စာဖတ်သူတို့ကို ဒီLaw of UX တွေကိုကျနောတတ်နိုင်သလောက် မျှဝေချင်တာကတကြောင်း……ဒါကြောင့်စာဖတ်သူတို့ အနေနဲ့ စာဖတ်ထောက်နေခဲ့ရင် နားလည်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ နားမလည်ရင်comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျနော် Laws of UX တွေထဲမှာမှ Jakob’s Law အကြောင်းနားလည်သလောက် ရေးမှာကတော့ ….
1)Jakob Law ဆိုတာဘာလဲ?
2) Jakob’s Law ကို ဘယ်သူသတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ?
3)ဘယ်လိုအသုံး၀င်တာလဲ? ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ?
4) Jakob’s law ကို ကျနော် ချဥ်းကပ်တဲ့ နည်းလမ်းများ (my way of approach methods to Jakob’s Law)
5) အဓိကမှတ်ယူစရာများ (Key Takeaways)
1) Jakob Law ဆိုတာဘာလဲ?
User တွေဟာ အခြားwebsites တွေအများကြီးမှာ အချိန်တွေဖြန်းလေ့ရှိပြီး
ကိုယ့်/သင့်ရဲ့ website ကိုလည်း သူတို့ အရင်က သုံးခဲ့ဖူးတဲ့
တခြားwebsites အများစုကလို သုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်း တူညီနေဖို့ ပိုလိုလားပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ဆို…. Google ရဲ့ Sign In…
UI/UX Design သမား တစ်ယောက် အနေနဲ့ လေ့လာကြည့်သင့်တဲ့ Grab Website
UI/UX သမားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အမြဲတမ်း Learning လုပ်နေရပြီး Behance, Dribble and uplab နဲ့ အခြား resources sites များကို လိုအပ်သလို ဝင်ကြည့်နေပေမဲ့ ….ဒီ site တွေဟာ တစ်ကယ့်project မဟုတ်ဘဲ Fakeဖြစ်ပြီး အများသောအားဖြင့် highlights ဖြစ်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုပဲ Sample အနေနဲ့ တင်ထားတဲ့အတွက်ရော ….
နောက် UI ပိုင်း နဲ့ Case Study တစ်ချို့ကို rely လုပ်လို့ရတဲ့ အနေထားလောက်ပဲ ကျနော်တို့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ (အချို့လောက်ပဲ မြင်ရင်မြင်တတ်သလောက်ရတာပါ)
တစ်ကယ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Fit in ဖြစ်တဲ့ အနေထားကိုရှာဖို့ခက်ပါတယ်။
တကယ့် Reality မှာ ကျနော်တို့ဟာ အပြင်မှာ တစ်ကယ် သုံးနေတဲ့ site တွေကို ဝင်ကြည့်ပြီး Inspiration ယူ သူ့ UI ရော UX ရောကို Analysis လုပ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
- သူ့ website ကောင်းနေရင်ရော ဘာကြောင့်ကောင်းရတာလဲ?
- ဘယ်နေရာတွေမှာတော့ဟာနေလဲ? လိုအပ်နေလဲ?
ကိုယ့်အနေနဲ့ UI/UX ကို ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လို improve လုပ်လို့ရလဲဆိုတာ ပိုမြင်သာပြီး အကျိုးများပါတယ်။
UI/UX Design သမား တစ်ယောက် အနေနဲ့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်သင့်တဲ့ Website တစ်ခုကတော့ …..
Grab Website ပဲဖြစ်ပါတယ်။
User Flows ဆိုတာဘာလဲ?သိထားသင့်တဲ့ Types of User Flow Chartsများအကြောင်း
User Flow ဟာUX Process or Design Thinking Process ရဲ့ Ideation Phase မှာ လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။
App ချင်းတူရင်တောင် User Flows ပိုချောမွေ့ smooth ဖြစ်တဲ့ Appဟာ User Experience ပိုကောင်းတဲ့ App ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
A passionate UX Designer, and I will share some articles about UX & UI Design. Sometimes I take photos and drink coffee.